China M-ezimilise Isefu welding enemingxuma Kucingo olubiyele (Enye-sifuba Post) kumvelisi efama elanga kunye noMthengisi | Pro kocingo
It is a uhlobo weld wocingo olubiyele elenziwe ngocingo oluphezulu wire sentsimbi kusingathwa weld kuqala uze usebenzise umatshini ukugoba ukwenza V ezimilise phezulu nasezantsi. Okokugqibela, gqibezela kwidipiti eshushu edityanisiweyo yengubo ye-zinc malunga ne-450g / m ukunciphisa umhlwa kunye nomhlwa ekusetyenzisweni. Amandla aphakamileyo kunye nocingo olomeleleyo kwaye kusetyenziswa ubukhulu becala njengezithintelo kwifama yelanga, kumzi mveliso.
I-PRO.FENCE inokubonelela ngokwezifiso kububanzi becingo, ukushiya izithuba, ukuphakama kocingo,
Oko kuxhomekeke kwimfuno ethile yeeprojekthi zakho. Siyila izixhobo zobungakanani obuncinci endaweni yeposti enkulu kunye nesithuba esinye endaweni yokwahlulahlula ukunciphisa iindleko zeprojekthi kwaye siqinisekisa ukuba ukusetyenziswa ngokungaguquguqukiyo. Yeyona nto uyikhethileyo ukuba ufuna ucingo olukumgangatho ophezulu kunye namaxabiso asezantsi eprojekthi yakho. Abathengi bethu abaninzi bayisebenzisa njengocingo lokhuseleko lwezityalo, iipaki zorhwebo, indawo yokupaka, indlela yendlela njl.
Ihlala isetyenziswa kwizityalo zamandla elanga, iifama zelanga, kodwa inokusetyenziswa kwipaki yemizi-mveliso, indawo yokupaka kunye neendlela zodwa.
Ucingo lweDia: 2.5-5.0mm
Enemingxuma: 60 × 120mm / 75 × 150mm
Iposi: φ48 × 2.0mm
Kugqityiwe: Hot nkxu kwalenza / Electric iqaqanjiswa / Powder wawutyabeka
1) Amandla aphezulu
Inkqubo kumgangatho wekhabhoni yocingo ngamandla oxinzelelo oluphezulu, kwaye uyigqibe kwindawo eshushu edityanisiweyo yentsimbi eyenziwe nge-450g / m2, uyihlanganise usebenzisa izixhobo ze-SUS 304. Abo badlala indima ebalulekileyo kwi-anti-corrosion. ISIQINISEKISO SOKUBHALA akukho rusting ubuncinci iminyaka emi-6.
Inephaneli enemingxunya, iiposti. Isakhiwo esilula sinokunceda ukufaka ngokulula kwindawo. Isithuba phakathi kweeposti sinokulungiswa apho kunokwenzeka khona nakwintaba enzima ethambekileyo.
Unxantathu wokugoba imilo ngaphezulu nasezantsi kwepaneli enemingxuma yokuxhathisa ukothuka kwangaphandle kunye nokwenza ucingo lubonakale luthandeka.
Into NO.: PRO-04 Ixesha Lead: 15-21 DAYS Imveliso Orgin: CHINA
Egqithileyo Isefu ebiyelweyo yocingo olubiyele ulimo kunye nokusetyenziswa kwemizi-mveliso
Okulandelayo: I-Pvc camera i-welds mesh rolls yokusetyenziswa kweshishini kunye nezolimo
Kucingo olubiyele ngentsimbi
Isefu yocingo oluthambileyo oluhlabayo lwezolimo ...
Ucingo lwefama lweenkomo, iigusha, amaxhama, ihashe
M-ezimilise Isefu welding mesh Fence For Solar ...